Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụrụ n’izu a ka akara akara ememe nke Black Friday. Anyi kwesiri ime ka o doo anya na n’agbanyeghi na ihe a amara dika Black Friday sitere na United States, na Spen na otutu obodo ndi ozo ha abanyela ndi otu ndi otu egwu egwu na uzo di ike. Ya mere, ihe mbụ anyị ga - eme ka Sunday a pụta ìhè bụ isiokwu metụtara ụfọdụ ego ndị a maka Mac na ngwa dị iche iche.
Ma na mgbakwunye na ego, onyinye na ozi ndị ọzọ metụtara Black Friday, anyị nwekwara ozi ndị ọzọ pụtara ìhè na m si Mac. Apple hapụrụ anyị na-enweghị ụdị beta n'ihi na ihe ọ bụla nke ngwaọrụ gị na nke a bụ n'ezie dị iche na Apple.
Dika m kwuputara na mbido, Black Friday weputara izu ma anyi malitere ngalaba a ji ozi a. You zụrụ ihe? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, gwa anyị na nkọwa.
Ozi na-esote metụtara Apple Pay na ịkwụ ụgwọ na obere azụmaahịa. N'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe Ọrụ a dị na Spen na ọtụtụ mba ndị ọzọ ma ụlọ ahịa nwere na-emegharị ha na nke a bụ ihe na ulo oru na Companylọ ọrụ square iji dozie usoro a.
Ozi a abụghị na ọ dị ịrịba ama, ọ bụ na obere ka ọ chọrọ ịmata ma na-awụ akpata oyi. Onye nwe Apple Watch ọ na-ese foto na ụfọdụ ọnya gị nkwojiaka nnọọ mkpa na na-ata ya ụta na nche cupertino. Apple na-enyocha ikpe ahụ anyị na-atụ anya ịmata ihe ga-esi na ya pụta n'oge na-adịghị anya.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ nzụta Apple nke ụlọ ọrụ Ihu ihu. Ọtụtụ n'ime unu ga na-eche ugbu a na Apple zụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ na ọ bụ eziokwu, mana nke a nwere njikọ na teknụzụ nke na-enye gị ohere ịmepụta avatars animated ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ dabere na ọdịdị ihu nke ndị odide ahụ n'oge na O yiri ka anyị na-enweghị obi abụọ a ezigbo mma zuo.
N'ikpeazụ anyị na-ahapụ bọọdụ mkpọsa na Apple na-etinye ebe dị iche iche na United States, na-egosi na oge a ma ọ bụrụ na ha dị njọ na Apple TV ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple Pay, Applezụ ahịa ihu, Black Friday na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac